Ije Ozi bu ire ohuru | Martech Zone
Agara m otu Indianapolis AMA nri ehihie ebe Joel Book kwuru okwu banyere ire ahia na ike nke otu. Ihe ngosi ya nwere plethora nke nnukwu ozi gburugburu iji ahịa dijitalụ iji jeere ndị ahịa ozi n'ụzọ dị irè karị. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ihe eji ewepụta ihe omume, enwere nke rapara m n'ahụ. Echiche bụ na: ijere ozi bụ ire ere ọhụụ. N'ụzọ bụ isi, echiche nke inyere onye ahịa aka dị irè karịa ịnwa iresị ha oge niile.
Kedụ ka nke ahụ ga-esi tinye n'ọrụ mkpọsa ahịa email gị? Zipu ozi ịntanetị na-enye aka nke na-arụ ọrụ otu nzube maka ndị ahịa gị. Lee ihe atụ ole na ole:
Ihe ncheta: ọ bụrụ na metụtara ngwaahịa gị, zipụ ndị ahịa gị ozi ncheta mgbe ha dị nso na ọ dị mkpa ịtụgharị ma ọ bụ zụta mejupụta.
Ihe ncheta ụgbọ ibu azụmahịa: oge ụfọdụ, ndị ahịa na-etinye ihe n’ụgbọala ha n’ebumnuche ịzụrụ, mana a na-egbochi ha tupu ha enwee ike imecha. Ozi ịntanetị ịhapụ ụgbọ ahịa nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji chetara ha na e nwere ihe ndị ka dị ma mee ka ọ dịrị ndị na-azụ ahịa mfe ịlaghachi ngwa ngwa ma mezue nzụta ha.
Ihe Nleta Ngwaahịa: ihe ndị a bụ ihe ncheta email-mmeri dị mma iji zigara ndị ahịa. Site na izipu, ị na-echetara ndị ahịa gị ka ha mejupụta nyocha na ngwaahịa ha zụtara n'oge na-adịbeghị anya. Agbanyeghị, nyocha ngwaahịa dị mma nwere ike ịkwalite ntụkwasị obi gị dị ka ụlọ ọrụ ma nye ndị ahịa n'ọdịnihu obi ike na ngwaahịa gị.
Ọ bụrụ n’itinyeghi ozi ịntanetị ndị a dịka akụkụ nke mmemme ahịa email gị, gịnị kpatara ya? Enwere ike ịtọ ha iji zipu na-akpaghị aka dabere na omume ndị ahịa ma ha na-ejere ndị ahịa gị ozi n'ụzọ dị irè karị, yana iweta ntinye ego ọzọ na akara ala gị. Dị ka slam dunk, nri? Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka iji mejupụta ụdị ozi ịntanetị ndị a n'ime mmemme email gị niile, biko gaa na Delivra taa.
Kedu ihe atụ email ndị ọzọ ị ga - asị na-ejere ndị ahịa ozi?
Tags: agbahapụ ịzụ ahịaemailemail Marketingihe ncheta ngwaahịaretail
Feb 17, 2014 na 7:00 PM
Inyere ndị ahịa anyị aka nwere ike ịdị nfe maọbụ ọ nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ, dabere n ’otu esi ele ya. Achọpụtala m na inyere ndị ahịa m aka bụ uru na-aba uru. ọbụghị naanị n’ego a na-akpata, kama a na-ekwu maka isi obodo.
Na ụbọchị ndị a, na ọnụọgụ nke akụkọ ọjọọ ndị ahịa na-enweta na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya karịa ijere ndị ahịa anyị ozi nke ọma. Maghị onye ma onye ma ọ bụ onye nwere ike ịbụ ụzọ azụ iji nweta onye ahịa ọhụụ.